Ukuhamba ngokuzolileyo kweli hlobo ngemoto ngale dashcam / isipili sokujonga ngasemva | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | 04/07/2021 16:10 | Ukuhlaziywa ukuba 04/07/2021 16:16 | ngokubanzi, Reviews
Kuya kusiba yinto eqhelekileyo ukunxiba dashcam kwizithuthi zethu. Ngelixa abasemagunyeni eSpain bengekagqityi ukuwulawula lo mbandela, kwamanye amazwe afana neRussia okanye i-United States sele beyimveliso efunwa kakhulu ngabaqhubi. Kule meko sifuna ukukubonisa enye yeedashcams ezinomdla kakhulu esinethuba lokuvavanya ukuza kuthi ga ngoku.
Fumanisa kuthi iWolfbox G840H-1 isipili sokujonga ngasemva enekhamera kunye nekhamera esemva, isipili sokujonga ngasemva nescreen kunye neempawu ezininzi ekunokubonelelwa ngazo. Hlala nathi kwaye siza kukubonisa ukuba yeyiphi le mveliso inqabileyo ethe yabamba umdla wethu.
Njengamaxesha onke, kwiActualidad Gadget sithathe isigqibo sokuhamba nohlalutyo olunzulu ngevidiyo elungileyo, ke ungaphoswa lithuba Rhuma kwisiteshi sethu YouTube Kwaye ke usishiyele izimvo kwividiyo ukuba unayo nayiphi na imibuzo, siya kuphendula njengesiqhelo, ngokukhawuleza okukhulu. Ke unokusinceda ukuba siqhubeke nokuzisa olu hlalutyo lunomdla.
3 Ukufakwa kunye ne-GPS ye-eriyali
4 Inkqubo yokurekhoda yedashcam kunye nenkqubo yokupaka
Le Wolfbox G840H isipili sokujonga ngasemva sibalulekile, into enkulu kunomndilili wezibuko esizibonayo yonke imihla, kwaye yile enesikrini esizi-intshi eziyi-12. Isibuko esivela ngasemva sihlala kwi-34 x 1 x 7 iisentimitha, ke ngokuqinisekileyo iya kuba nkulu kunesipili sakho esidityanisiweyo sokujonga ngasemva. Inexabiso elinomdla kakhulu kwiAmazon, jonga.
Kwimeko yethu siyikhwelise kwisipili sokujonga iPeugeot 407 kwaye siyigquma ngokupheleleyo. Yenziwe ngeglasi ebonakalayo, eya kusenza sikwazi ukubona isikrini xa sifuna, okanye siyisebenzise njengesipili esisezantsi. Kwinqanaba elingaphezulu siya kufumana unxibelelwano esiza kuthetha ngalo kamva, ezantsi iqhosha elinye lokucima nokucima isikrini kunye nesixhobo esipheleleyo, ngasemva ikhamera ephambili eya kusebenza njengedashcam, nenkqubo eya kusivumela ukuba silungelelanise isikhokelo sokurekhoda.
Le nkqubo inyusa iprosesa esembindini ye-ARMCortex A7 ngamandla e-900 MHz, ngaphezulu kokwanele ukusebenza kwesipili esingasemva seWolfbox esenza imisebenzi yaso ngaphandle kokulahla kwaye ijike ngokukhawuleza kakhulu xa siqala ukuqhuba. Asinalo, ewe, ulwazi malunga nobungakanani be-RAM esi sixhobo sinyukayo. Ngokwenxalenye yayo, sinomfundi wekhadi le-MicroSD, oku kubandakanywa nomthamo we-32 GB kwaye isipili esijonga ngasemva siyakuba noxanduva lokugcina nokucima umxholo ngokokumisela okwabelweyo.
Ikhamera yangaphambili: 5MP Sony IMX415 enesisombululo esingu-2,5K
Ikhamera esemva: Isisombululo se-2MP FHD
Sinee-eriyali ze-GPS zangaphandle ezifakwe kwiphakheji, kunye nekhamera yangemva enesisombululo se-1080P esineenkxaso ezahlukeneyo ngokuxhomekeke kwiimfuno zethu. Isikrini, esichukumiseka ngokupheleleyo, sinesisombululo se-FHD ngaphezulu kokwaneleyo ekwenzeni imisebenzi yemihla ngemihla. Kwinxalenye yayo sine-G-Sensor Oko kuyakwenza ushicilelo xa lubona iingozi, kunye ukubeka iliso ekupakeni Ukuba siyayihlengahlengisa kumthombo osisigxina wamandla ovumela oko, kuya kuxhomekeka kuhlobo lofakelo esilwenzileyo ngelo xesha.
Ukufakwa kunye ne-GPS ye-eriyali
Ukufakwa kuya kuba lula ngakumbi kunokuba besinokucinga. Ngokubhekiselele kwisipili sokujonga ngasemva, siyilungelelanisa nje ngamanye ama-washer erabha afakwe ebhokisini kwisipili sethu sokujonga ngasemva kwaye siyakulungelelaniswa ngokugqibeleleyo. Ngoku thinta i-wiring, siqala nge-miniUSB, endikucebisa ukuba uhambe kwindawo elungileyo yesithuthi, Sazisa nje intambo evela phezulu, efihliweyo ngasemva kwentloko, njengoko kufanelekileyo (ndincoma ukubukela ividiyo okanye ukufunda imiyalelo kwiphakheji) kwesinye sezibane zeemoto.
Ngoku sifumana i-eriyali ye-GPS, Idityaniswe kwelinye izibuko ngale njongo. I-eriyali ine-3M tape, ke ndicebisa ukuba uyincamathisele kwiglasi yefestile ukuze ufumane ezona ziphumo zibalaseleyo.
Okokugqibela ikhamera yangasemva, intambo yeemitha ezi-6 ifakiwe eya kwanela kwiimeko ezininzi. Sibeka intambo kwi-upholstery de sifike ngasemva. Sigqithisa intambo emngxunyeni wesibane sepleyiti yelayisensi kwaye sincamathisele ikhamera ngasemva kwindawo embindini bumper kwipleyiti yelayisensi ngokwayo ngaphandle kokuyigubungela. Dlala ngoku qhagamshela ucingo olubomvu ngocingo olufanayo olunika amandla ekukhanyeni "okubuyela umva", Ngale ndlela ikhamera iya kwenza imigca yokupaka. Kwisithuba esingaphantsi kweeyure ezimbini kufanelekile ukuba ugqibile ukufakela ngokupheleleyo Ngala manyathelo ekugqibeleni siya kuba nenkqubo efakiweyo.
Inkqubo yokurekhoda yedashcam kunye nenkqubo yokupaka
Idashcam iya kwenza ukurekhodwa kwilog ngokuxhomekeke kuseto lwethu, sinokuhlengahlengisa amacandelo aphakathi kwemizuzu emi-1 kunye nemi-5. Sinobuchwephesha beWDR ethintela ukungafani nezibane zasebusuku ukuze kugcinwe ukurekhodwa okucacileyo. Ukuba G-woluvo, ukurekhodwa kuya kugcinwa kwaye kuthintelwe xa kubhaqa intshukumo ngequbuliso, kuya kwenziwa okufanayo ukuba senza "itephu kabini" kwiscreen.
Ukuba siqhagamshele ucingo olubomvu ngoku kulapho isibane sibuyela umva, xa sizisa u- "R" ziya kuvela iilayini zoncedo lokupaka kwisipili esijonga ngasemva, ekufuneka siqale silinganise ngesandla (ngokuchukumisa isikrini) ukuze isinike iziphumo ezinokuthenjwa. Ngawo onke amaxesha siya kuba nakho ukukhetha ukuba siyijonge ngasemva okanye ngaphambili ikhamera kwiscreen, ngokunjalo Nxibelelana nokukhanya kwayo ngokushenxela kwicala lasekhohlo lesipili.
Ngokubhekiselele kwi-GPS, Ukuba siyifakile ngokuchanekileyo, iya kusinika ulungelelwaniso lwendawo esenza kuyo ukurekhoda kwaye iya kusibonisa isantya ngqo ngexesha lokwenyani kwicandelo elisezantsi lasekhohlo lesipili sokujonga ngasemva. Le nkqubo iqhube kakuhle kwiimvavanyo zethu. Ukurekhodwa ebusuku kuye kwathandeka, ngaphandle kwengxaki malunga noku.
Kuvavanyo lwethu, ikhamera iqhube kakuhle kakhulu. Inemakrofoni yangaphakathi ukuze sikwazi ukulungelelanisa ukuba ingaba sifuna ukuba isandi sirekhodwe, ngendlela efanayo kuseto esiya kuthi sikwazi ukukhetha iSpanish njengolwimi. Ukuba silwenzile kakuhle ufakelo, inyani kukuba sifumana iziphumo ezintle kwaye ndiyifumene yeyona nkqubo yezokhuseleko inika elona xabiso liphezulu sinokuthi silifakele ukuhamba kweli hlobo. Ixabiso layo kwiAmazon liyi-169 euro, nangona ihlala inezaphulelo ezininzi ze-15 ye-euro.
Ithunyelwe nge: 4 de julio de 2021
Utshintsho lokugqibela: 4 de julio de 2021
Ibandakanya yonke into yofakelo
Isebenza kakuhle nangokukhawuleza
Olunye ukhanyiso lwangaphandle
Mhlawumbi inkulu kakhulu kwiimoto ezihambelanayo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ukuhamba uzolile kweli hlobo ngeemoto ngale dashcam / ngasemva kwesipili
Mholo. Ndinomdla kwi-wolfbox G840H isipili sokujonga ngasemva. Ndingathanda ukusebenzisa ikhamera engasemva ukujonga abantwana bam kwizihlalo ezingasemva. Ngaba ucinga ukuba ndingakufanelekela? Nditsho ngokubeka ikhamera kunye neflip yekhamera (ejongeka ijonge ezantsi). Enkosi